Xijaar oo safar amniga la xiriira ku tagey Galmudug | KEYDMEDIA ONLINE
Xijaar oo safar amniga la xiriira ku tagey Galmudug
Booliska Soomaaliya ayaa isku diyaarinaya inay amniga goobaha doorashooyinka la wareegaan dhawaan, iyagoo kaashanaya Ciidamada AMISOM.
DHUUSAMAREEB, Soomaaliya - Taliyaha Booliska Soomaaliya Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, ayaa Maanta oo Axad ah gaarey magaaladda Dhuusamareeb, ee xarunta maamulka Galmudug, isagoo ay la socdeen taliyeyaal sare.
Wafdiga taliyaha ayaa Garoonka si diiran loogu soo dhaweeyay, iyadoo kadibna la geeyay saldhigayada Ciidanka Booliska oo kulamo kula leeyahay Saraakiisha ku sugan deganaada Galmudug, oo inta uu ku sugan yahay dib u habeyn ku sameyn doono booliska.
Labo degaanka doorasho ayaa Xildhibaanada lagu soo dooran doonaan Galmudug bisha December illaa January, kuwaasoo kala ah Dhuusamareeb iyo magaaladda Gaalkacyo, halkaasoo la geynayo Ciidamo booliska ah oo amniga sugi doono.
Shanta Maamul Goboleed ee dalka, mid kasta labo magaalo oo kamid ah ayaa lagu qaban doonaan doorashadda Baarlamaaniga, waxaana soo raaca Muqdisho oo lagu doonayo Xildhibaanada beelaha Banaadiriga iyo gobollada waqooyi ee Somaliland.
Galmudug ayaa sheegtay inaysan haysan boolis u gaar ah, sidaas darteed ay dalbanayso in boolis Federaalka ka socda la geeyo degaanada ay doorashooyinka ka dhici doonaan, taasoo DF ay aqbashay, una dirtay Ciidamo.
0 Comments Topics: booliska doorashadda 2020 galmudug